भाडाको घरमा बस्दै आएका प्रचण्डले कहाँबाट जुटाउँछन् पूर्वलडाकुलाई तलब ? - साँचो खबर
पहिलो पटक उपत्यका बाहिर ४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सुविधा सम्पन्न बोधी होम्स हाउजिङ बन्ने
सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरेपछि सुवास नेम्वाङले खोले यस्तो रहस्य
१कोभ्याक्सको खोप मार्चको दोस्रो साता ल्याइँदै,कहाँ–कहाँ बन्दैछन् नयाँ कोल्डचेन ?
२नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता
३सामुदायिक वन क्षेत्रमा आज बिहान कुहिएको अवस्थामा एक महिलाको शव फेला पर्यो
४भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न दुई जना प्रहरीलाई एक तह बढुवा
५२५ लाख नगदसहित दुई जना भारतीय कलैयाबाट पक्राउ
६पोखराको फेवातलमा एक पहिचान नखुलेको युवक मृत अवस्थामा फेला
७शिक्षकको तलब उपलब्ध गराउन माग गर्दै बिध्यार्थी ले लगाए आफ्नै बिध्यालयमा ताला
८ट्रकले ठक्कर दिँदा सफारी रिक्सा चालकको मृत्यु
भाडाको घरमा बस्दै आएका प्रचण्डले कहाँबाट जुटाउँछन् पूर्वलडाकुलाई तलब ?
२०७७ फागुन ७, शुक्रबार (५ दिन अघि)
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सुरक्षामा पूर्वलडाकुलाई राखेपछि उनको सम्पत्तिको विषयमा पुन: बहस सुरु भएको छ ।
यसअघि प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमाथि बहस भएको थियो । सर्वहाराको राजनीतिक सिद्धान्तअनुसार बनेको पार्टीका प्रमुख भए पनि प्रचण्ड राजर्षी जीवनशैलीमा देखिन्छन् ।
अर्कातर्फ सम्पत्ति विवरण भने सर्वहाराकै जस्तो देखाउँदै आएका छन् । यसैले उनको सम्पत्ति विवरणमाथि धेरैले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । ADVERTISEMENT सरकारी सुरक्षा दस्ता अघिपछि परिचालन हुँदै गर्दा उनी आफैँले रहर गरेर अहिले पूर्वलडाकुसमेत खटाएका छन् । तिनीहरूको तलब सुविधाको विषयमा धेरैको चासो देखिन्छ ।
यसअघि प्रचण्डको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट डिएसपीको कमान्डमा २६ र सशस्त्रबाट इन्स्पेक्टरको कमान्डमा ४७ जना गरी ७३ सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । हालै, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०७७मा पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सशस्त्रका १६ र प्रहरीका दुई जना मात्रै खटाउने उल्लेख भएसँगै दाहालको अगुवा स्कर्टिङ गाडीसहित दुवै सुरक्षा निकायबाट ५५ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् ।
हाल उनको सुरक्षामा १८ सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । तर, प्रचण्डले ती सुरक्षाकर्मीले आफूलाई नपुग्ने बताउँदै कम्तीमा १५ तालिमप्राप्त माओवादी पूर्वलडाकु सुरक्षामा राखेका छन् । यो संख्या आवश्यकताअनुसार बढ्ने पनि गर्छ ।
आवश्यक मात्रामा पूर्वलडाकुको टोली अगुवा स्कर्टिङ र कार्यक्रमस्थल व्यवस्थापनअन्तर्गत खटिन थालिसकेको पूर्वलडाकुसमेत रहेका दाहाल–नेपाल समूहका नेता युवराज दुलालले बताए ।
आफूसँग धेरै सम्पत्ति नरहेको र सर्वहारा नेता रहेको बताउने प्रचण्ड भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । सांसद भएबापतको तलबभत्ताले जीविका चलाउँदै आएका उनको त्यो स्रोत पनि संसद् विघटनसँगै बन्द भएको छ ।
अहिले सुरक्षाका लागि थपिएका १५लडाकुबाहेक उनको सचिवालयमा झन्डै १० भन्दा बढी सदस्य काम गर्दै आएका छन् । जसमा स्वकीयसचिव, निजी सहयोगी, सहयोगी, सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, सुरक्षा सल्लाहकारलगायत उनीसँग छन् । यसअघिका सचिवालयमा १० र अहिले सुरक्षामा १५ पूर्वलडाकु रहँदा अहिले प्रचण्डसँग कम्तीमा २५ जना दैनिक सँगै रहन्छन् । प्रचण्डले दैनिक आफूसँगै खटिने २५ जनाका लागि प्रतिव्यक्ति कम्तीमा मासिक ३० हजार दिए पनि सात लाख ५० हजार खर्च हुन्छ ।
उनीहरूको खानपान तथा सवारीसाधन खर्चबापत कम्तीमा साँढे दुई लाख खर्च भए कुल दश लाख खर्च हुने देखिन्छ । यतिधेरै खर्च प्रचण्डले कहाँबाट जुटाइरहेका होलान् ! प्रचण्डको आम्दानी कति ? प्रचण्ड विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन् । संसद् छँदा मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ, आवास सुविधा १८ हजार, टेलिफोन तथा पत्रपत्रिका खर्च तीन हजार, धाराबिजुलीको दई हजार, अतिथि सत्कार र विशेषभत्ता मासिक एक हजार गरी उनको ८० हजार दुई सय ३० आम्दानी थियो ।
संसद् विघटनपछि आम्दानीको उनको यो स्रोत बन्द भएको छ । अरु व्यापार व्यवसाय केही नरहेको उनले बताउँदै आएका छन् । दाहालकै अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा चितवनमा एक कट्ठा जमिन र तीन तोला सुनमात्र छ । तर, प्रचण्डको जीवनशैली देख्नेहरु उनको व्यक्तिगत विवरणलाई अविश्वसनीय ठान्छन् ।
अत्यन्तै न्यून सम्पत्ति र आम्दानी भने बन्द भएको अवस्थामा रबाफिलो जीवनशैली अपनाउन झनै सहयोगी थप्दै गएका उनीमाथि प्रश्नमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ ‘नदेखिएको आम्दानीको स्रोत के हो ?’ सम्पत्तिको बहसको केन्द्रमा रहेका प्रचण्डमाथि सम्पत्ति विवरण लुकाको र छलढाँट गरेकोजस्ता आरोप छन् । तर, उनीनिटक नेता कार्यकर्ता भने प्रचण्ड सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको आलोकमा हुर्केका नेता भएको, भ्रष्टाचार नगरेको,नातागोता नपोसेको, हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेको, राजनीति स्वयंसेवा हो, आफ्नो जीवनलाई हत्केलामा राखेर हिँडेका प्रचण्डसँग कहाँबाट सम्पत्ति आउनु भनी प्रतिवाद गर्दैछन् ।
तर, आलोचकका लागि भने प्रचण्ड गरीब हुन भन्ने कुरा तर्कंसंगत लाग्दैन । नत उनको रबाफिलो जीवनशैलीले नै त्यो पुष्टि गर्छ । आलोचकहरु भन्न खोजिरहेका छन्, ‘प्रचण्डले सम्पत्ति विवरणमा मिथ्या रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै जनता झुक्याउन खोजेका छन् । उनले धेरै सम्पत्ति कमाएका छन् । ०३५ सालदेखि ०५२ सालसम्म र ०५२ देखि ०६३सम्म उनले अर्बौं सम्पत्ति लुकाएका छन् । अरू नेता तथा व्यावसायीलाई सम्पत्ति राख्न दिएका छन् ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि प्रचण्ड हरेक गतिविधमार्फत् सम्पत्ति जोड्नमा केन्द्रित छन् । खरबपतिको जस्तो शाही खानदानी जीवनशैली अपनाएका प्रचण्डको जीवनशैलीमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिनाअघि ३८ पृष्ठ लामो पत्रमा प्रचण्डको अपारदर्शी तरिकाले व्यवसायीसँग उठबस भएको बताउँदै उनको जीवनशैलीप्रति प्रश्न उठाएका थिए ।
रहस्यपूर्ण जीवनशैलीले शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिन्ह रबाफिलो जीवनशैली अपनाउने जोसुकै नेताले आफ्नो दैनिकी र खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यसरी आर्थिक अनियमितता रोक्न र पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्ने नसकिने धेरैको बुझाइ छ । सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुले वासस्थान, भ्रमण तथा अन्य खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पार्टी अध्यक्षजस्तो पदमा आसीन व्यक्तिको कुनै पनि बैंक खाता देखाउनु राम्रो होइन । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफूले भोगचलन गरेको सम्पत्तिको सम्पूर्ण स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्छ, खर्च विवरण पारदर्शी रुपमा देखाइनुपर्छ ।
यो कानुनी व्यवस्थाभन्दा नैतिक रुपमा बढी आवश्यक छ।’ नेताहरुको शंकास्पद तथा रहस्यपूर्ण जीवनशैलीले शासन प्रणालीमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्ने उनको भनाइ छ ।